General Dhagabadan oo Raali galin u jeediyay Shacabka Soomaaliyeed | KEYDMEDIA ONLINE
General Dhagabadan oo Raali galin u jeediyay Shacabka Soomaaliyeed
Muqdisho (KON) - Abaanduulaha Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed Generel Dhegabadan ayaa Dadka Soomaaliyeed raali galin u jeediyay, raaligelintaan ayaa kusoo aaday mudadaan Dambe oo Kooxo Burcad ah oo dharka Ciidamada Qalabka sida labisan oo dhac iyo Tacadiyo foolxun u geestaan Schacbiga.
Erayada Generel C/kariin Yuusuf Aadan kasoo yeeray ayaa waxaa laga dhadhansanayaa inuu ka xunyahay Tacdiyadaas loo geesanaayo Muwaadinka Soomaaliyeed, wuxuuna dhoor goor Muujiyay in Waxqabadkiisa ku wajahan la dagaalanka Argagixiasada uu yahay Mid daacad ah.
“Dadka Labiska Ciidanka beenta ah sisa waan ka hortagaynaa. Tallaabo ayaa laga qaadayaa, waxa weeye Kooxahaasi kuwa doonaya inay meel ugu dhacaan sharafka Ciidamada Xoogga” sidaasi ayuu yiri General Dhagabadan.
Dhegabadan ayaa waxa uu sheegay in tallaabo cad ay ka qaadayaan Maleeshiyaadka ku labisan dareeska Ciidamada Dowladda, isagoo dhinaca kale tilmaamay in Dharka dareeska ay soo iibsadaan islamarkaana ay ku dhibaateeyaan dadka rayidka ah.